Orinasa mpanamboatra Sharpener Sharpener | SJJ
Ny fanamafisana pensilihazo dia fitaovana afaka manatanteraka ny asany haingana sy mahomby. Fomban'iza amin'ny tendrony pensilihazo ilainao, ny maranitra dia hanampy anao hahatratra azy. Ny zava-maranitra pensilihazo dia vokatra ilaina ho an'ny ankizy, maranitra plastika misy lelany vy.
Ny fanamafisana pensilihazo dia fitaovana afaka manatanteraka ny asany haingana sy mahomby. Fomban'iza amin'ny tendrony pensilihazo ilainao, ny maranitra dia hanampy anao hahatratra azy. Ny zava-maranitra pensilihazo dia vokatra ilaina ho an'ny ankizy, maranitra plastika misy lelany vy. Miaraka amina karazana fanamafisana pensilihazo isan-karazany hisafidianana, mora ny mahita safidy mifanaraka amin'ny zavatra ilainao, fanomezana lehibe miverina amin'ny vanim-potoanan'ny sekoly.
Ny fanamafisana pensilihazo misy loko mifangaro mifangaro dia afaka manome ny ilanao mandritra ny fotoana lava / amin'ny fotoana rehetra.
Fisehoana baoritra mahafatifaty, ny ankizy dia hanana fahalianana sy tiana bebe kokoa
Ny plastika vita amin'ny tontolo iainana sy ny vy azo antoka dia mamela anao hihodina tsara kokoa ny pensilihazo.
Mety amin'ny habeny; azo apetraka mora foana amin'ny fitoeran-pensilihazo, paosy na tanana, ampanjifaina ny habeny takiana aminao.
Lavorary ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy hampiasaina any an-tsekoly, birao, trano, tetik'asa zavakanto, sns. Valisoa mahafinaritra aorian'ny hetsika any an-dakilasy mahafinaritra.
Teo aloha: Notebook & Notes sticky
Manaraka: Kitapo pensilihazo sy tranga pensilihazo
Mpanamboatra pensilihazo mpandrafitra